सन् १९१८ : पाँच करोड मानिसको ज्यान लिएको स्पेनिस फ्लू कसरी भयो नियन्त्रण ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
सन् १९१८ : पाँच करोड मानिसको ज्यान लिएको स्पेनिस फ्लू कसरी भयो नियन्त्रण ?
access_time२०७७ साल जेष्ठ ८ गते, बिहीबार ०२:११ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​ कोरोना अपडेट
एजेन्सी । अहिले कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको छ । यो समयमा धेरैले स्पेनिस फ्लूका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । स्पेनिस फ्लूका कारण २ देखि ५ करोड मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान गरिन्छ । त्यो समयमा पनि क्वारेन्टाइन र मास्को प्रयोग गरिएको थियो ।
सन् १९१८ को मे महिनामा भाइरसका कारण पहिलो मृत्यु हुँदै गर्दा युके अझै युद्धमा होमिइरहेको थियो। उक्त सङ्क्रमणसँग लड्न अन्य देशका सरकार जस्तै युके पनि तयार अवस्थामा थिएन।
रोयल सोसाइटी अफ मेडिसिनका लागि सर आर्थर निउजहोमले सन् १९१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार स्पेनिस फ्लू सैन्य टुकडीहरूको ओसारपसारदेखि हतियार कारखाना र भिडभाडयुक्त बस अनि रेल जस्ता स्थानहरूमा डढेलो लागे झैँ फैलिन थाल्यो।
सन् १९१८ को जुलाइ महिनामा उनले बिरामी भएको भए सर्वसाधारणहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन र भिडभाड भएका स्थानमा नजान भन्दै ूसार्वजनिक प्रयोगका लागि लेखेको ज्ञापन पत्रू सरकारले बेवास्ता गरेको थियो।
ती नियमको पालना गरिएको भए धेरैको ज्यान जोगिन सक्ने बताउँदै आर्थर थप्छन्, 'कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका राष्ट्रिय परिस्थिति हुन्छन् जति बेला स्वास्थ्य र जीवनको जोखिम हुँदा समेत प्रमुख दायित्व नै रहन्छ।'
सन् १९१८ मा इन्फ्लुएन्जाको उपचार थिएन। निमोनिया जस्तो रोग निको पार्न एन्टिबायोटिक पनि थिएन। अस्पतालहरू छिट्टै भरिन्थे।
कैयौँ नाटक घर, चलचित्र र नृत्य देखाइने हल अनि गिर्जाघरहरू बन्द गरिए पनि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर केन्द्रीकृत रूपमा लकडाउन लागू गरिएको थिएन।
युद्धकालीन समयका कारण पहिले नै खुला रहने समय तोकिएका पबहरू प्रायस्जसो खुलै थिए। ठूला फुटबल प्रतियोगिताहरू युद्धकै कारण रद्द गरिएको भए पनि क्षेत्रीय स्तरमा हुने त्यस्ता प्रतियोगिताहरू भने रद्द गरिएको थिएन।
त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा व्यापक भिडभाड हुने गर्थ्यो र त्यो महामारीको अवधिभरि चलेको थियो। केही सहरहरूमा निस्सङ्क्रमण गर्ने 'स्प्रे' छरिएको थियो भने केहीले जीवाणुबाट बच्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्न गर्थे।
जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना अलमल पार्ने किसिमका थिए र अहिले जस्तै झुट्टा समाचार अनि षड्यन्त्रका सिद्धान्त पनि धेरै थिए।
केही कारखानाहरूमा सङ्क्रमणबाट बच्न सहयोगी हुने बुझाइका कारण चुरोट पिउनमा रोक लगाइएको थिएन। प्रचारका लागि गरिएका अभियानहरूमा उक्त रोग खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा फैलने बताइएको थियो।
सन् २०१८को नोभेम्बर महिनामा न्यूज अफ द वर्ल्डले आफ्ना पाठकहरूलाई यस्तो सुझाव दिएको थियो: 'प्रत्येक साँझ र बिहान नाकभित्र साबुन पानीले सफा गर्नु । साँझ बिहान हाच्चिँउ गर्नु अनि गहिरो सास लिनु। गलबन्दी नलगाउनु। हिँडेरै काममा जानु।'
सन् २०१८ को महामारीको प्रभाव नपरेको कुनै पनि देश थिएन। त्यसको प्रभाव र त्यसबाट बच्ने सरकारी प्रयास भने देश अनुसार फरक थियो।
अमेरिकाका केही राज्यमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थियो जसको नतिजा मिश्रित थियो। अन्य केहीले मास्कको प्रयोग अनिवार्य बनाएका थिए।
सिनेमा घर, नाटक घरसहित मनोरञ्जनका लागि प्रयोगमा ल्याइएका अन्य स्थानहरू देशभरि बन्द गरिएका थिए।
पछिल्लो २० वर्षदेखि क्षयरोग विरुद्ध अभियान चलाइरहेको न्युयोर्क अन्य राज्यका तुलनामा बढी तयार देखिएको थियो। फलस्वरूप त्यहाँ मृत्यु हुनेहरूको दर कम थियो।
त्यसै कारण उक्त राज्यका स्वास्थ्यसम्बन्धी मामिला हेर्ने आयुक्त मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिने चलचित्र घरसहित अन्य स्थान खुला राख्न दबावमा परे।
अहिले जस्तै त्यस बेला पनि स्वच्छ हावालाई सङ्क्रमण फैलन नदिन सम्भावित उपायका रूपमा हेरिएको थियो र त्यसैका आधारमा केही सरल उपायहरू अपनाइएका थिए।
उक्त महामारीको अन्त सम्ममा ब्रिटेनमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या २२८,००० पुगेको थियो र जनसङ्ख्याको एक चौथाइ सङ्क्रमित भएको आशङ्का गरिएको थियो।